တရုတ် Plush Fantasy လူကြိုက်များသောပန်းရောင်ရိုးရိုးအံဝင်ခွင်ကျနယ်စပ်ရေးရာ Thermal Shawl ပဝါအမျိုးသမီးများနေ့စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Gusta
Plush Fantasy လူကြိုက်များသောပန်းရောင်ရိုးရိုးအံဝင်ခွင်ကျနယ်စပ်ရေးရာ Ther ...
စိတ်တိုင်းကျအရောင်တရုတ် Hemming ဆောင်းရာသီ Macaron H ကိုပူနွေးလာမှု ...
ရှိခိုး Romantic Pashtoosh ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Pashmina Shawl
Plush Fantasy လူကြိုက်များသောပန်းရောင်ရိုးရိုးအံဝင်ခွင်ကျနယ်စပ်ရေးရာ Thermal Shawl ပဝါအမြိုးသမီးမြား
1 Piece / Poly Bag
လနှုန်း 500000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
အရေအတွက် (ပိုငျးပိုငျး) 1 - 360 > 360
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (ရက်) 35 ညှိနှိုင်းရမည့်
item အမှတ် WB04
အဖုံး 1 ကို PC / OPP, 100PCS / CTN
pattern & အရောင် စိတ်ကြိုက် Accept
ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ် / အပူပုံနှိပ် / ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ် / အပြည့်အဝအရောင်ပုံနှိပ်လွှဲပြောင်း /
ဝန်ဆောင်မှု OEM & လိမ္မော်ရောင် Accept
ပို့ဆောင်ချိန် 45-60 ရက်အတွင်း
သငျသညျကိုလကျခံနိုငျပါငွေပေးချေ၏အဘယျသို့သော 1. ?
ကျနော်တို့မျက်မှောက်ငွေပေးချေမှုမှာ T / T သို့မဟုတ် L ကို A / C ကိုလက်ခံနေကြတယ်။
ငါအမှဝယ်ယူနိုင်ရန်ထားရှိမတိုင်မီ 2. သင်အခမဲ့နမူနာများကိုနိုင်သလား?
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ကျနော်တို့နမူနာများ၏နှစ်ကြိမ်တန်ဖိုးကိုငြသင်ပထမဦးဆုံးမိန့်ပြီးနောက်သင်တို့ဆီသို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, အခမဲ့နမူနာကိုလက်မခံကြဘူး။
အားလုံးပုံများ, ပတ်ဝန်းကျင်ကတည်းကအစစ်အမှန်နမူနာကနေကွန်ပျူတာမော်နီတာရဲ့အရောင်ခြားနားချက်ယူနေကြတယ်, ဒါကြောင့်အနည်းငယ်အရောင်ခြားနားချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကအဘို့သင့်နားလည်မှုတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
ကျနော်တို့စတော့ရှယ်ယာအားလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့တချို့ပူရောင်းချခြင်းတိုတောင်းသောအချိန်၌ရောင်းရလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်တဖန်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ထားရန်အချိန်လိုပါတယ်။ တိုင်းရာသီလည်းကျနော်တို့ကဟောင်းနွမ်းဖယ်ရှားပစ်ရမှာဖြစ်ပြီးထွက်လတ်ဆတ်ငါဆောင်ခဲ့မည်တချို့ကစတိုင်လည်း website ကနေထုတ်ယူလိမ့်မည်။
5. လက္ကားစျေးနှုန်းများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာအမိန့်အရေအတွက်ကဘာလဲ? အဆိုပါအနည်းဆုံးရောနှောနိုင်ရန်အရေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ 100pcs ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ EXPRESS သို့မဟုတ် forwarding စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ စီစဉ်ပေးမတိုင်မီတစ်ခုချင်းစီဖြန့်ဝေအခကြေးငွေသင်တို့နှင့်အတူအ check လုပ်ထားပါလိမ့်မည်။
ငါကုန်ပစ္စည်းများရနိုင်ဘယ်လောက်ကြာ 7. ? စတော့ရှယ်ယာအတွက်ကုန်စည်, ငါတို့သည်သင်တို့သူတို့ကိုပို့ဆောင်ထားမည်ဆိုပါက မဟုတ်ပါစတော့ရှယ်ယာများတွင် 3days.If အတွင်းကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပြင်ဆင်ထားရန် 15-20days လိုအပ်ပါတယ်။ EXPRESS များအတွက်: ငါ forwarding အဘို့အထွက်ပေးပို့သင်၏လက်ကိုမှ 3-5 ရက်အကြာမှာ: 30 ရက်အတွင်းသင်၏လက်ကိုငါထွက်ပေးပို့ပြီးနောက်။
ငါလက်ခံရရှိသောပဝါပြီးနောက်ပဝါနဲ့တူမကျင့်လျှင် 8. အဘယ်သို့ငါပြုနိုင်သနည်း
Pls သင်သည်ခံနှင့်ပဝါကိုအသုံးပြုကြပြီမဟုတ်ပြီးနောက်, 7days အတွင်းပဝါစစျဆေးရညျအသှေးပြဿနာများကိုလည်းမရှိစေလျှင်, ခြွင်းချက်မရှိကုန်တင်သက်ဆိုင်ရာမှတပါး, သင်ဝန်ဆောင်မှုဖလှယ်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ company.If အားဖြင့် client ကိုပေးဆောင်ပါလိမ့်မည် 7days ထဲကအရည်အသွေးပြဿနာများဖော်ပြထားခြင်း , သင့်ကုန်ပစ္စည်းများပြန်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်စက်ရုံသို့သွားရောက်မှကြိုဆိုပါ၏!
ယခင်: Ladies ပန်းပဝါပူနွေးလာမှု 100% ထဲမှာပါတဲ့ရိုးရိုးပဝါ Shawl
နောက်တစ်ခု: Online Exporter Cashmere Scarf Shawls - Nepal Large Pashmina Malaysia Shawl Without Crystal – Gusta
hijab ပဝါနှင့် Shawls
Lambswool ပဝါ Shawl
ဇိမ်ခံအမျိုးသမီးများနေ့ကိုရီးယားက Round သိုးမွှေးထိုးစက်ပဝါ
မိမိစိတ်ကြိုက် Logo Crinkle လဲမှို့ Crepe ထဲမှာပါတဲ့ပဝါ
ရောင်စုံ polyester တင့်တယ်လဲမှို့ပန်းပဝါ
လက်ကားအထူးကျော်နီဆောင်းရာသီ Jacquard Lad ...
custom စံနမူနာလက်စေသည့် Big ကိုရီးယားထူထပ်သော Long က ...
E-mail ကို: 126catherine@163.com
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ Featured ကုန်ပစ္စည်းများ - ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း